Canada Gurukota rezvehutano Nechimbichimbi Chirevo pamusoro peKupararira kutsva kweCCIDID Variant Omicron
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Canada Gurukota rezvehutano Nechimbichimbi Chirevo pamusoro peKupararira kutsva kweCCIDID Variant Omicron
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Gurukota rezvehutano reCanada Vanoremekedzwa Jean-Yves Duclo
Hurumende yeCanada inoenderera mberi nekutora danho risati ramboitika uye rakasimba kuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwevaCanada. Matanho anhasi, kusanganisira zvitsva zvinodiwa zvekuyedzwa kusati kwasimuka kune nyika yechitatu kune vafambi vanouya kuCanada kubva kune dzimwe nyika dzekumaodzanyemba kweAfrica, ari kuiswa kuitira kudzivirira misiyano mitsva yehutachiona hweCOVID-19 kubva kuunzwa nekupararira muCanada.
Gurukota rezvehutano reCanada Honourable Jean-Yves Duclos akapa chirevo ichi chakakosha kuvanhu veCanada.
Ndaziviswa nhasi nePublic Health Agency yeCanada kuti kuyedzwa nekutariswa kweCCIDID-19 kesi kwasimbisa nyaya mbiri dzeOmicron musiyano wekunetsekana muOntario, Canada.
Kubudirira uku kunoratidza kuti hurongwa hwedu hwekutarisa huri kushanda.
Ndataura nemumwe wangu wepurovhinzi muOntario vane vashandi vehutano veruzhinji vari kushanda mudunhu uye munharaunda kuti tibate uye kuteedzera nyaya idzi.
Sezvo kutariswa uye kuyedzwa kuri kuenderera mberi nemapurovhinzi nematunhu, zvinotarisirwa kuti dzimwe nyaya dzemhando iyi dzichawanikwa muCanada.
Ndinoziva kuti mutsauko mutsva uyu ungaite kunge une chekuita, asi ndinoda kuyeuchidza vanhu vekuCanada kuti kubaya, pamwe chete nehutano hweveruzhinji uye matanho ekudzivirira emunhu, ari kushanda kudzikisa kupararira kweCCIDID-19 nemisiyano yayo munharaunda medu.
Musi waMbudzi 26, ndichipindura kushushikana nezve Omicron musiyano wekunetsekana, ndakazivisa kuti Hurumende yeCanada yakawedzera matanho emuganho kune vese vafambi vanga vari mudunhu reSouthern Africa - kusanganisira South Africa, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, neNamibia—mumazuva 14 apfuura vasati vasvika muCanada, kusvika January 31, 2022.
Matanho aya emuganho ari kuitwa apo veCanada nevepasi rose vezvekurapa, hutano hweveruzhinji uye nharaunda dzekutsvagisa dzichiongorora musiyano uyu - sezvakamboitwa nemisiyano yapfuura - kuti tinzwisise zviri nani zvinokonzeresa maererano nekutapurirana, kuratidzwa kwekiriniki, uye kushanda kwekudzivirira.
Vakuru vehutano hweveruzhinji muSouth Africa vakasimbisa kuti imwe itsva yeCCIDID-19 yakasiyana (B.1.1.529) yaonekwa munyika iyoyo. Mumaawa makumi maviri nemana apfuura, musiyano uyu - wakanzi Omicron neWorld Health Organisation - waonekwawo mune dzimwe nyika.
Kubva pakatanga denda, Hurumende yeCanada yakaisa matanho pamuganhu wedu kudzikisa njodzi yekupinza uye kutapurirana kweCCIDID-19 uye akasiyana ayo muCanada ane chekuita nekufamba kwenyika. Nhasi, Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, Vanoremekedzwa Omar Alghabra, uye Gurukota rezvehutano, Honourable Jean-Yves Duclos, vazivisa matanho matsva emuganho kuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwevaCanada.
Senzira yekudzivirira, kusvika Ndira 31, 2022, Hurumende yeCanada iri kuita matanho akavandudzwa emuganho kune vese vafambi vanga vari mudunhu reSouthern Africa - kusanganisira South Africa, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, neNamibia - mukati. mazuva gumi nemana apfuura ndisati ndasvika muCanada.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika vakaenda kune chero ipi yenyika idzi mukati memazuva gumi nemana apfuura havazobvumidzwa kupinda muCanada.
Vagari veCanada, vagari vekusingaperi, uye vanhu vane chinzvimbo pasi pe Indian Act, zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira kana kuve nenhoroondo yapfuura yekuongororwa kuti vane CCIDID-19, vanga vari munyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura vachange vachiwedzerwa kuyedzwa, kuongororwa, uye kuvharirwa matanho.
Vanhu ava vanozodiwa kuti vatore, mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubva, bvunzo isina kunaka yeCCIDID-72 yemamorekuru munyika yechitatu vasati vaenderera mberi nerwendo rwavo kuenda kuCanada. Pakusvika kuCanada, zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira kana kuve nenhoroondo yapfuura yekuongororwa kuti vane CCID-19, vanozoongororwa nekusvika ipapo. Vese vafambi vanobva munyika dzakanyorwa vanozodiwawo kuti vapedze bvunzo pazuva rechisere mushure mekusvika uye kugara vega kwemazuva gumi nemana.
Vese vafambi vanobva kunyika dzakakanganisika vachaendeswa kuvakuru vePublic Health Agency yeCanada (PHAC) kuti vaone kuti vane chirongwa chakakodzera chekuvharirwa. Avo vanosvika nemhepo vanozodikanwa kuti vagare munzvimbo yakatarwa yekuvharirwa ivo vakamirira mhedzisiro yavo yekusvika. Ivo havazotenderwe kuenderera mberi nekufamba kudzamara hurongwa hwavo hwekuvharirwa hwatenderwa uye vawana mhedzisiro yekusvika isina kunaka.
Avo vanosvika nepamunda vanogona kubvumidzwa kuenda vakananga kunzvimbo yavo yekuzviparadzanisa nevamwe yakakodzera. Kana vasina hurongwa hwakakodzera - kwavasingazoonana nemunhu wavasina kumbofamba naye - kana vasina chekufambisa kuenda kunzvimbo yavo yekugara, vanozonzi vagare panzvimbo yakatarwa.
Pachave nekuwedzera kuongororwa kwezvirongwa zvekuvharirwa kwevafambi vanobva munyika idzi uye nekutarisisa kwakasimba kuona kuti vafambi vari kutevedzera matanho ekuvharirwa. Kupfuurirazve, vafambi, zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira kana kuve nenhoroondo yapfuura yekuongororwa kuti vane CCIDID-19, vakapinda muCanada vachibva kunyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura vachabatwa uye kutungamirwa kuti vaongororwe nekugariswa kwavo vega ivo vakamirira. mhinduro dzebvunzo idzodzo. Hapana kuregererwa kunopiwa zvakananga kune izvi zvitsva zvinodiwa.
Canada inoenderera mberi nekuchengetedza pre-yekupinda mamorekuru kuyedzwa kwevafambi uye vasina kuvharirwa vafambi vekunze vanosvika kubva chero nyika kudzikisa njodzi yekupinzwa kunze kweCCIDID-19 kusanganisira akasiyana. PHAC yanga ichitarisawo data rekesi, kuburikidza nekuyedzwa zvisina kujairika pakuyedzwa pakupinda muCanada.
Hurumende yeCanada icharamba ichiongorora zviri kuitika uye ini ndichapa zvigadziriso sezvatinazvo. "
Hapana ndege dzakananga pakati peCanada nenyika dzekumaodzanyemba kweAfrica.
Hurumende yeCanada iri kushanda nemapurovhinzi nematunhu pamwe neCanadian COVID Genomics Network kuona hutachiona hweCOVID-19 hunozivikanwa uye hunogona kubuda hunosanganisira iyi mutsauko mutsva kubva kuSouth Africa.
Muna Kukadzi 2021, Hurumende yeCanada yakawedzera hunyanzvi hwayo hwekutsvaga nekutevera zvakasiyana-siyana zvekunetsekana muCanada nekudyara mamirioni makumi mashanu nematatu emadhora mune yakasanganiswa Variants yeConcern Strategy. Hurumende yeCanada iri kushanda nemapurovhinzi nematunhu uye Canadian COVID Genomics Network neCanadian Institutes of Health Research pakuongorora, kutevedzana uye kuedza kwesainzi kuona zvinozivikanwa uye zvingangove zvichibuda hutachiona hweCOVID-53.
United Kingdom, European Union neUnited States dzakaisa zvirango zvakafanana kuderedza njodzi yekuunza musiyano uyu kubva mudunhu reSouthern Africa.
Zvimwe pamusoro paJean-Yves Duclos, Gurukota rezvehutano reCanada
Anoremekedzwa Jean-Yves Duclos anga ari nhengo yeParamende yeQuébec kubvira 2015.
Akamboshanda seMutungamiriri weTreasury Board uye Gurukota reMhuri, Vana, uye Kubudirira Kwemagariro.
Minister Duclos munyori akanyatsoburitswa, mutauri wemusangano, uye nyanzvi yezvehupfumi. Asati asvika 2015, anga ari Mutungamiriri weDhipatimendi reEconomics uye purofesa akachengetwa paUniversité Laval.
Pamusoro pemabasa ake ehuprofessor, Minister Duclos vakabata aimbove Industrial Alliance Research Chair paEconomics of Demographic Change (iye zvino ari Sachigaro weResearch muIntergenerational Economics), akashanda seMutungamiriri-Akasarudzwa weCanadian Economics Association, uye aive nhengo yeInstitute. sur le vieillissement et la participation sociale des aînés.
Vaivawo Mutevedzeri weMutungamiriri uye Shamwari yeCentre interuniversitaire de recherche en analyze des organisations, Senior Fellow of the Fondation pour les études et recherches sur le développement international, uye Fellow-in-Residence kuCD Howe Institute. Ndiye zvakare muvambi wePoverty and Economic Policy Research Network (Kudyidzana kweEconomic Policy).
Kushanda nesimba kwaGurukota Duclos kwakacherechedzwa nerubatsiro rwepamusoro, kusanganisira mutengo Marcel-Dagenais kubva kuSociété canadienne de science économique uye Mubairo weHarry Johnson webepa rakanakisa rakaburitswa muCanada Journal of Economics. Muna 2014, akasarudzwa Shamwari yeRoyal Society yeCanada, rukudzo rwepamusoro rwakapihwa vaongorori veCanada.
Gurukota reDuclos vakawana Bachelor of Arts in Economics (First-Kirasi Honours) kubva kuYunivhesiti yeAlberta, uye madhigirii e master uye ezvechiremba eEconomics kubva kuLondon School of Economics uye Political Science.
SOURCE Public Health Agency yeCanada